Famokarana ronono : tsy ahitana fiovana ny vokatra sy kalitao | NewsMada
Famokarana ronono : tsy ahitana fiovana ny vokatra sy kalitao
Tsy ampy ny vokatra ronono eto Madagasikara, dimy taona izao tsy niova firy ny vokatra tsy maharaka ny tinady, raha ny fanazavana avy ao amin’ny minisiteran’ny Fiompiana. Tsy mahazatra ny mpanjifa koa anefa ny ronono.
Tsy ao anatin’ny fahazaran’ny Malagasy ny manjifa ronono. Olana iray hafa ny fahefa-mividy. 5 l /taona /olona ihany ny fanjifana ronono, raha 25 l / taona/olona ny salanisa aty Afrika. Betsaka ihany anefa ireo karazana ombivavy eto an-toerana, saingy betsaka ihany koa ny olana mahakasika io fiompiana io. Tsy ampy ny vokatra noho ny tsy fanjarian-tsakafo ho an’ireo ombivavy ireo. Efa napetraka ny lamina mandritra ny 10 taona ho avy nanomboka ny taona 2014, nandritra ny tsenabe nokarakarain’ireo faritra malaza mpamokatra ronono : Vakinankaratra, Analamanga, Amoron’i Mania, Matsiatra Ambony, Itasy, Bongolava ary Alaotra Mangoro. Tanjona napetraka aloha ny fanomezan-danja ny fiompiana amin’ny ankapobeny ho an’ny toekarena eto Madagasikara, indrindra ny sehatry famokarana ronono, ho fidiram-bolan’ny rehetra. Tsy ahitana fiovana hatramin’izao, eo amin’ny vokatra sy ny kalitao.
Avy amina karazan’ombivavy vahiny ny 67 % amin’ny vokatra ronono eto an-toerana, 33 % ny avy amin’ny karazan’omby eto an-toerana. Raha ny antontanisa avy ao amin’ny minisiteran’ny Fiompiana, tsy misy afa-tsy 6,5 % ihany ny vokatra tonga any amin’ireo indostria mpanodina izany. Marihina fa mbola vitsy dia vitsy rahateo ny indostria na ireo mpandraharaha madinika mampiasa vola amin’ity sehatra famokarana ronono ity.
Tsy mahita ronono tsara
Tsy vitsy amin’ireo mpanao yaourt sy fromazy, milaza fa sahirana tsy mahita ronono tsara. Ny zava-misy matetika, ampifangaroan’ny mpivarotra ny ronono sy rano, indrindra rehefa maintany. Na ny toerana fasiana ronono, betsaka ny tsy mety aminy, toy ireny barika manga plastika ireny. Anisan’ny fehinkevitra noraisina nandritra ny tsenabe anefa ny fanaraha-maso ny vokatra rehetra. Tsy voahaja ireo fepetra napetraka ho an’ny kalitao, indrindra fa vitsy amin’ireo miasa amin’ity sehatra ity no manana fitaovana manara-penitra.
Vitsy ny afaka manome fahafaham-po amin’ny vokatra avy eto an-toerana, tadiavin’ireo tranombarotra vaventy. Voaporofo izany amin’ny fahamaroan’ireo vokatra avy any ivelany.